Tallaabooyinka kuu horseedi kara guul degdeg ah oo dhanka nolosha ah
Home Aragti-doon Tallaabooyinka kuu horseedi kara guul degdeg ah oo dhanka nolosha ah
“Guusha waxaa dhadhan iyo cusbo u yeela waa guuldarada.”
furaha guusha nolosha oo degdeg ah
Xilligan casriga ah ee dunida, dadku waxay jecel yihiin degdegga iyo boobsiiska. Laga soo billaabo is caateynta illaa xawaaraha internetka iyo sida degdegga ah ee aad uga jawaabeyso farriimaha iyo email-lada laguu soo diro.
Dhammaan waa arrimo la xiriira sida aadanaha ay u jecel yihiin degdegga ayey muujinayaan. Taasna waxay gaarsiisan tahay xitaa heerka shaqada iyo guusha nolosha. Dadka waxay jecel yihiin in si degdegga ah ay meel sare kaga gaaraan xirfaddooda.
Ma jirto hal sir oo sababi karta in hal habeen aad ku taajirto, in Alle kuu qadaray mooyee. Balse isku day tabahan si guushaada ay u noqoto mid degdeg ah:
La imow yool wax ku ool ah.
Si guushaada ay u noqoto mid sii degdegta, waxaad u baahan tahay in aad sameysato yoolka aad tiigsaneyso ee xirfaddaada.
Waxaa suuragal ah in meelo fudud aad heli karto haddii aad isku deydo in aad dejisato yool la taaban karo. Sababtoo ah, micneynta guusha, dadka way ku kala aragti duwan yihiin.
Waa muhiim in aad si cad u qeexdo yoolka sida shaqsiga ah aad u tiigsaneyso. Maxay tahay guusha xirfadeed ee aad dooneyso? Maxaan u baahanahay in aan sameeyo si aad guushaas u gaaro? Yaa iga caawin kara? Iyo su’aalaha sida gaarka ah u taabanayo is weydii ka dibna raadi xalkooda.
Yool muddo dheer ah wuxuu kaa caawinayaa in aad sameysato xilliga aad guusha gaari karto iyo sida ay wax kasta kugu kala qeybsan yihii.
Ujeedooyiinka cad waxay kaa caawinayaa in aad la timaato tallaabooyiin la taaban karo oo aad waqti lumis kugu ahayn iyo in aad ka fogaato waxa aan guusha ku gaarsiin Karin.
Dejinta yoolka waxay sidoo kale kaa caawineysaa in aad markasta dhiiranaato oo aadan niyad jabin, howlkarna aad noqoto. Waana arrimaha sababa guusha.
Deji wadiiqo dhab ah, hana ka leexan.
Dadka guulaha waaweyn gaaray way garanayaan arrintan:
Waa faa’iido weyn in hal wadiiqo aad dejiso ka dibna aad ku celceliso maalin karsta. Ku celcelinta waxay kaa caawineysaa in aad horey u sii socoto aana sare u kacdo.
Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in ku celcelinta ay kaa caawineyso in aad si fudud ku qiimeyso guusha aad gaartay iyo sida uu yahay horumarkaaga.
Sidoo kale waa tallaabo kuu fududeyneysa in dhaqankaaga iyo dabcigaaga ay is bedelaan si guusha ay u noqoto mid degdeg ah.
Ku celicelinta waa sida waqtiga gaarka ah ee aad seexaneyso ama soo tooseyso iyo xilliga aad shaqo kasta qabaneyso waa in ay kuu cayim-naadaan aadna ku celceliso maalin kasta.
Toosi ama hagaaji waxyaabaha aad ku celcelineyso.
Kaw arran haddii aan kuu sheego in aad noloshaada wax fudud ka dhigi karto, iskana leexin karto jidgooyooyiinka iyo caqabadaha kaa hor istaagaya in aad guuleysato?
Arrimaha wanaagsan in aad ku celceliso waxay gacan wayn ka geysanayaan in aad guul wanaagsan oo muuqata aad gaarto.
Balse dhaqamada iyo dabeecadaha xun iyo waqti-luminta oo aad haddana maalin kasta sameyso, waxay guu geysanayaan qasaare wayn oo dhanka nolosha ah.
Haddaba sidee u hagaajin kartaa waxa wanaagsan ee aad maalin kasra sameyneyso?
Marka hore, eeg oo qiimee wax kasta oo waqti badan kaa qaata ee haddana aadan waxba ka faa’idin.
Ma og tahay in arrimahan, sida baraha bulshada oo aad manta oo dhan ku jirto, iyo in aad fadhi kudirir aado ama iska soo wareegto, in aysan waxba kugu soo kordhineyn.
Haddaba, marka aad ogaato arrimaha waqtigaaga luminaya, waa in aad si adag uga howlgashaa sidii aad ku baabi’in lahayd ama aad ku yareyn lahayd.
Waxay u baadan tahay aadaab iyo dishibiliin sidii aad isaga joojin lahayd waxyaabaha caqabadda iyo dhibka kugu ah. Haddii aad taa ku guuleysato, shaqada way kuu fudaaneysaa, waadna gaari kartaa guusha aad u baahan tahay.
Raadi lataliye ku caawiya oo aqoon leh.
Inta badan dadka guulaha waaweyn ka gaaray nolosha, arrintan way ka siman yihiin:
Waxay leeyihiin lataliye aqoon leh. Waa qof ay isku xirfad yihiin, guulo muuqdana ka gaaray xirfaddaas, muddana ku soo dhex jiray.
Khibraddooda marka la eego, waxaad ka heli kartaa macluumaad iyo xog muhiim ah iyo tusaalooyiin wnaagsan.
Sidoo kale, wuxuu qofna noocaas ah kaa caawinayaa in aad ka fogaato waxyaabaha sababi kara guul darro iyo niyab jab soo wajaha xirfaddaada iyo waxa aad hiigsaneyso. Waxayna ku barayaan sida degdegga ah ee loo xalliyo dhibaatooyiinka imaan kara.
Baro sida loo dhaho MAYA.
Mid ka mid ah raga tujaarta ee caalamka wuxuu yiri: “Kuma siin karo hab rasmi ah oo guul lagu gaaro, balse waxaan kuu sheegi karaa sababta guuldarada: Waa in aad isku deydo in aad markasta ka farxiso qof walba.”
In aad tiraahdo HAYE, waan ogolaaday wax kasta waa arrin iska fudud, kana farxineysa qofka kale.
Balse haddii ay aad u badato HAYE-daada iyo ogolaanshiyahaaga, waxay ku gaarsiin doontaa xaalad xun oo cakiran.
Haddii aad wax kasta ogolaato oo aad tahay qof HAYE-diisu badan tahay, waxaad gaari kartaa heer aan qabato shaqo kaa tan badan oo aad kugu culus, taas oo soo dedejineysa in aay guuldareysato. .
Waan ognahay in ad adag tahay in MAYA la dhoho, balse waa arrin markasta u fiican caafimaadkaaga iyo guushaada.
Wixii aadan awoodin waa in aad diidaa, ama haddii shaqo kale aad hayso ha ku darsan mid kale hana aqbalin. Sidoo kale, waqti ha ku lumin waxyaabo aan faa’iido u ahayn horumarkaaga.
Noqo qof lacagta dhaqaaleysta oo caqli adeegsada.
Way adag tahay in aad guul gaarto haddii aad isticmaaleyso lacag kasta oo ku soo gasha, oo mararka qaar aad ku iibsaneyso ama ku bixineyso waxa aan dan iyo faa’iido kuu ahayn.
Haddii aad dooneyso guul degdeg ah, waa in aad noqotaa qof lacag keydsada oo meel dhigta.
Marka aad tahay qof ku wanaagsan isticmaalka lacagta, waxaad noqoneysaa qof sare u sii kaca oo dhaqaalena meel ku og.
Haddii uu soo baxo mashruuc maalgashi ama ganacsi la billaabayo, waxaad noqoneysaa qofka ugu horreeya, haddii lacag ay meel kuu taallo. Marka waa in aad diyaar u ahaataa waxkastoo degdeg ah oo soo baxa.
Wax ka baro khaladaadka aad sameyso.
Markastoo aad ka baxdo sameynta waxyaabaha aad ku faraxsan tahay keliya, aadna wajahdo caqabadaha, waxay aad ugu badan tahay in khaladaad badan aad sameyso.
Haddii aad dooneyso guul heer sare ah, hadaba simbiririxooyiinkaas yaryar yaysan ku niyad jebin, dibna yaysan kuu celin.
Ha u arkin in ay guuldarada tahay dhammaadka dunida, balse u arag bilowga fursadaha ku horyaalla.
Fashilka iyo guuldarada waa macalimkeena ugu sareeya. Wax aad maanta u aragto khalad kaa dhacay ayaa cashir wayn u noqon kara guusha mustaqbalkaaga.
Diiradda saare horumarka. Ha eegin in wax kastaa ay kaamil yihiin. Haddii aad tahay qof wax ka barta guuldarada, waxaad noqoneysaa qof adkeysi leh oo guushana si fiican u dhedhemiya.
Previous articleToddobo cunto oo u fiican awoodda caafimaadka maskaxda
Next articleIska ilaali shantan dabeecad haddii aad dooneyso bulsho la dhaqan wanaagsan